Tokony hahita toerana ao Karnataka ho an'ny mpizahatany
Karnataka dia fanjakana tsara tarehy miaraka amin'ny sary an-tendrombohitra mahavariana, morontsiraka, ary ny fiainana an-tanàna sy ny alina mba hozahana nefa koa zava-mahatalanjona vita maritrano vita amin'ny olombelona amin'ny endrika tempoly, moske, lapa ary fiangonana.
The renivohitr'i Karnataka. Mitondra ny lohateny hoe Silicon Valley any India ho an'ny indostrian'ny fanombohany. I Bangalore dia tanànan'ny Garden ihany malaza amin'ny vala sy zaridainany. Ny Cubbon Park sy i Lalbagh dia zaridaina maitso sy maitso malaza hitsidika azy indrindra mandritra ny lohataona misy voninkazo mamelana. Ny lohataona dia fotoana mahafinaritra hitsidihana an'i Bangalore satria mamelana voninkazo isaky ny arabe ny tanàna. Ny Nandi Hills dia tampon-tendrombohitra malaza eo imason'ny Bangaloreans sy ny mpizahatany, indrindra amin'ny fiposahan'ny fiposahan'ny masoandro. Bangalore dia iray amin'ireo toerana mitranga any India miaraka aminy labiera mahavariana, trano fisotroana amin'ny alina ary klioba. Ny Bannerghatta Biological Park / Zoo dia tsy maintsy tsidihina ihany koa rehefa any Bangalore ianao. ny Lapan'i Bangalore ary Lapan'ny fahavaratra ao Tipu Sultan dia fahagagana arsitektory roa malaza afaka mitsidika ianao rehefa eo. Ny Fort Chitradurga dia marika iray hafa malaza hitsidika an'i Bangalore.
Mijanona ao - Leela Palace na The Oberoi
Mila ianao Visa e-Tourista any India (e India or Visa Indiana Online) handray anjara amin'ny fahafinaretana amin'ny maha olom-pirenena vahiny any India. Raha tsy izany, afaka mitsidika an'i India ianao amin'ny a Visa any India e-Business ary te hanao fialam-boly kely sy fahitana any Bangalore. ny Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana mamporisika ny mpitsidika any India hangataka fangatahana Indian Visa Online (e-Visa any India) fa tsy mitsidika ny Kaonsily indianina na masoivoho indiana.
Mangalore, tanety amoron-tsiraka any Karnataka
Fahagagana amin'ny morontsiraka iray hafa ao Karnataka. Ny tanànan'ny Mangalore iray manontolo dia voahodidina morontsiraka mahatalanjona. Ny sasany amin'ireo morontsiraka mahatalanjona dia Tannirbhavi sy Panambur. Betsaka ny tanàna toa an'i Udupi sy Manipal any akaiky izay tsy maintsy asiana fitsidihana eo akaiky eo ihany koa. Tolo-kevitra manokana ho anao ny mitsidika ny morontsirak'i Pithrody tokony ho 15 kilometatra miaraka amin'ny renirano amin'ny lafiny iray ary ny ranomasina Arabo amin'ny lafiny iray ary fahitana hitan'ny maso tsara izany.
Mijanona ao - trano fonenana Rockwoods na Goldfinch Mangalore
Ireo teratany vahiny tonga any India amin'ny e-Visa dia tsy maintsy tonga amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina voatondro. na Bangalore sy Mangalore dia seranam-piaramanidina voatokana ho an'ny e-Visa Indiana miaraka amin'ny seranan-tsambo voatondro koa i Mangalore.
Iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra ao Karnataka izay mahatonga anao hahatsapa ho toy ny tsy misy sarimihetsika. ny > Mihaona amin'ny Ranomasina Arabo ao Gokarna ny Ghats Andrefana ka ny toerana dia a fahafinaretana ho an'ireo tia tendrombohitra sy mpitia amoron-dranomasina. Betsaka ny morontsiraka mahafinaritra azo tsidihina ao Gokarna avy amin'ny Om Beach izay morontsiraka amoron-dranomasina mitokana ary ahafahanao mankafy fotoana mangina mijery ny onja na mananika ny harambato alohan'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany. ny Half Moon Beach miantoka ny ezaka ataonao hahatongavana any rehefa mila mitsangatsangana mba hahatongavana any ianao fa toerana mahatalanjona sy masina ny miala sasatra. ny Gokarna Beach dia be mpitia ary be mpizaha tany, ka ho sarotra ny mahita toerana mitokana eto. Ny morontsiraka Paradise ihany koa dia azo idirana amin'ny fitsangatsanganana na amin'ny sambo ihany ary io no morontsiraka farany any Gokarna.
Kudle Beach View Resort sy Spa na Sea U Sand
Misy lafiny roa mankany Hampi, ny iray hanaovana fety ary ny iray hijerena ny kolontsaina Hampi. ny lafiny kolotsaina Hampi manana tempoly be dia be azo atolotra Tempolin'i Sreevirupaksha, Tempolin'i Vijaya Vithala, Tempolin'i Hazara Rama, ary Tempolin'i Achyutaraya. Hampi dia manana havoana vitsivitsy ihany koa izay azon'ny mpiakatrano tendrombohitra zahana toy ny Matanga Hill misy fiposahan'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro. Ny havoana Anjaneya dia heverina ho toerana nahaterahan'i Lord Hanuman. Ny havoana Hemakuta koa dia manana tempoly maro sy fahitana mahafinaritra ny tanànan'i Hampi. Ny rava malaza ao Hampi dia natsangana tamin'ny taonjato faha-14 ary a Toerana lova UNESCO. Ny sasany amin'izy ireo dia Hampi Bazaar, Lotus Mahal, ary House of Victory. ny lafiny hippie an'i Hampi dia manome fifaninanana ho an'i Goa ho foiben'ny antoko India. Afaka mivezivezy amin'ny manodidina ny tanàna akaikin'i Hampi ianao, mianika ny havoana Anjaneya, mitsambikina hantsana ary mizaha ny farihy Sanapur mitaingina vatohara.
Mijanona ao - Toerana miafina na Akash Homestay
Gol Gumbaz natsangana tamin'ny taonjato faha-17
Rehetra fahagagana amin'ny maritrano ary endrika be pitsiny ary ny fampidirana ny maritrano Hindu sy Silamo dia nahatonga an'i Vijayapura nantsoina hoe Agra any India atsimo. Mampalaza ny tanàna ny zava-mahatalanjona amin'ny maritrano amin'ny fomba Silamo. Ny tsangambato malaza indrindra eto dia ny Gol Gumbaz natsangana tamin'ny taonjato faha-17. Ny tsangambato dia ny fasan'ny mpanjaka Mohammad Adil Shah ary namboarina tamin'ny fomba Indo-Islam. Ny tranobe dia namboarina tamin'ny fomba izay re ny akoako imbetsaka manerana ny galeria. ny Jumma Masjid dia tranokala malaza iray hafa any Vijayapura dia namboarin'ny mpanjaka iray ihany tamin'ny fandresena ny empira Vijayanagar. ny Bijapur fort dia naorin'i Yusuf Adil Shah tamin'ny taonjato faha-16. Ibrahim Roza, Bara Kaman ary Ibrahim Roza Masjid dia tsangambato malaza hafa azonao zahana ao Vijayapura.
Mijanona ao - Spoorthi Resort na Fern Residence
Coorg, toeram-pambolena kafe manitra
Coorg dia atao Batemy ho an'ny Ekosy any Atsinanana. ny ny fofon'ny kafe no hameno ny rivotra manodidina anao, indrindra mandritra ny fotoam-pijinjana. Ny ahi-maitso main'ny havoana sy ny lanitra manga dia mahatsiaro tena ho toy ny any am-paradisa. ny Monasiteran'ny Namdroling dia tranokala malaza eo akaikin'i Coorg. Misy riandrano roa manakaiky an'i Coorg izay tsy maintsy tsidihina koa, Abbey ary Iruppu. Ny tranokala masina Talakaveri, ny niavian'ny renirano Cauvery dia eo akaikin'i Coorg ihany koa. Ny tobin'i Elephant Dubbare ao Dubbare dia adiny iray latsaka avy eo Coorg ary afaka mankafy mandro Elefanta ao ianao. Misy ihany koa ny tampon'isa kely toa an'i Brahmagiri sy Kodachadri azonao andehanana. Azonao atao koa ny mankafy ny rafting ony ao Dubbare.
Coorg sy toerana malaza Hill-station any India
Chikmaglur dia hafa tobin'ny havoana malaza any Karnataka. ny Mahatma Gandhi National park dia toerana fizahan-tany tianao indrindra ho an'ny fianakaviana. Ny riandranon'i Kallathigiri sy Hebbe dia riandrano malaza roa any amin'ny faritra be olona mpizaha tany. Ny Niagara Falls of India, Jog Falls dia tsy dia lavitra an'i Chikmaglur fa ny dia mandritra ny adiny efatra dia mendrika ny fotoananao sy ny ezaka ataonao indrindra mandritra ireo volan'ny mononta. Misy farihy roa malaza ao Chikmaglur mpizahatany hijerena sambo ihany koa.
Mijanona ao - Aura Homestay na Trinity Grand Hotel
Ny tanànan'i Mysore dia fantatra amin'ny tanànan'ny Sandalwood. Ny lapan'i Mysore dia natsangana teo ambany fanaraha-mason'ny anglisy. Izy io dia natsangana tamin'ny endrika maritrano Indo-Saracenic izay endrika fampiroboroboana amin'ny maritrano ny fomba Mughal-Indo. ny Mysore Palace izao dia tranombakoka izay misokatra ho an'ny mpizahatany rehetra. I indhe Brindavan Gardens dia eo amin'ny 10 kilometatra miala ny tanàna ary mifanila amin'ny tohodrano KRS. Ireo zaridaina dia manana fampisehoana loharano izay tsy maintsy jerena. Eo akaiky eo ny havoana Chamundeshwari sy ny tempoly izay tsidihan'ny mpizahatany sy ny Hindus mpivavaka. Ny farihy Karanji dia ary ny valan-javaboary dia tranokala tian'ireo mpizaha tany mankafy mijery ny rano eo afovoan'ny natiora. Nianjera i Shivanasamudra, teo amin'ny ony Kaveri ary ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny volana septambra ka hatramin'ny janoary dia manodidina ny 75 kilometatra.
Karnataka dia trano fonenan'ny valan-javaboary marobe izay ahafahan'ny biby mivezivezy malalaka ary mamela ny mpizahatany hahita biby ao amin'ny fonenany voajanahary.
Olom-pirenena amin'ny firenena maro ao Etazonia, Frantsa, Aostralia, Germany, Espaina, Italia dia afaka India e-Visa(Indian Visa Online). Azonao atao ny mangataka ny Fampiharana e-Visa an-tserasera Indiana eto indrindra.
Fangatahana e-Visa any India